Apple dia miasa amin'ny Mac vaovao 3 miaraka amin'ny coprocessors manokana | Avy amin'ny mac aho
Ny MacBook Pro miaraka amin'ny Touch Bar no solosaina finday voalohany, fa ny Mac voalohany an'ny orinasa, amin'ny iampidiro coprocessor hanampy ny ekipa rehefa manao karazana fiasa manokana. Aorian'izay, ny iMac Pro, no Mac faharoa an'ny orinasa nampiditra an'ity karazana coprocessor ity hikarakara asa manokana mba hamoahana ny enta-mavesatra avy amin'ny processeur lehibe.
Araka ny efa nampoizina, tsy ho izy irery ireo, satria araka ny filazan'i Bloomberg, ny injenieran'ny Apple dia sahirana amin'ny famolavolana Mac vaovao telo izay hampiditra mpandrindra mpiara-miasa, coprocessor izay tsy hitovy amin'ny T1 sy T2 izay hitantsika amin'izao fotoana izao ao amin'ny MacBook Pro miaraka amin'ny Touch Bar sy ny iMac Pro, ho "mahay" kokoa izy ireo.
Mark Gurman, nilaza fa miasa amin'ny Mac telo ny goavambe Cupertino Ny daty fanombohana andrasana voalohany dia amin'ity taona ityNa dia mahita ny fihemoran'ny faharetan'ny Apple tato anatin'ny taona vitsivitsy aza isika dia afaka mitsahatra tsy manangana ny fanantenantsika raha mikasa ny hanavao ny Mac ho an'ny maodely vaovao navoakan'i Bloomberg eny an-tsena.
Ireo Mac vaovao, dia ho maodely azo entina sy birao araka ny notaterina tamin'i Mark Gurman avy amin'ilay orinasa ihany. Ny maodelin'ny birao angamba dia ny Mac Pro, Mac izay ho maodely indray, hanandrana hamaly ny andrasan'ireo mpampiasa nentim-paharazana an'ity fitaovana ity, izay nanome tsiny an'i Apple tamin'ny taon-dasa noho ny fandaozan'izy ireo ny orinasa.
Andro vitsy lasa izay, nampahafantarinay anao ny tsaho vaovao nilaza izany Apple dia niasa tamin'ny maodely 13-inch vaovao, izay hampijanonan'ny Apple amin'ny farany ny MacBook Air, maodely iray izay vao nahavita 10 taona teny an-tsena ary mbola modely fidirana ara-toekarena indrindra amin'ny ekosistra Mac, ka azo inoana fa hampiditra sokajy vaovao i Apple hanolotra ny MacBook Air. Tsy maintsy miandry isika vao hahita ny fivoaran'ny vaovao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Apple dia miasa amin'ny Mac vaovao 3 miaraka amin'ny coprocessors manokana